Iwe uri fekitari kana kambani yekutengesa?
Fekitori yako iri kupi? Ndingakushanyira sei?
Fekitari yedu inowana muDongguan City, padhuze neShenzhen, tinogamuchira kutishanyira!
Ndingawana samples here?
Isu tinokudzwa kupa yako sampuli.
1. Zvinopfuura makumi maviri nemairi maitiro ekugadzirisa ketani uye yakakwana yekusona yekurapa system, zvese zvigadzirwa zvinoenderana nemamiriro ekunze.
2. Yakazara zvigadzirwa zvekugadzira.
3. Yakasimba R & D kukwanisa uye kuongorora maabara.
4. OEM tinogamuchira neushamwari.
Nzira yekugadzirisa sei mvura mucherechedzo mushure mekushambidza mabwe?
kana kugeza chaiko kwakaitwa zvakanaka hakuonekwe chiratidzo chemvura. Iri dambudziko rinofanira kugadziriswa panguva yekudaira.
Kujairika kunogeza kunoda kuwedzera chemakemikari mumiririri here?
kana usinga wedzera kemikari mumiriri mukuda kuita, kuda kushandisa kukwidza tembiricha kana kushambidza nguva kuda. Asi kana iwe uchida kuzadzisa zvauri kuda kuita, kana kuwedzera emakemikari machira akadai sekuda mvura, mhedzisiro ichave iri nani.
Lace ye jean inochinja ruvara mushure mekunge classics enzyme yashambwa, chii mhinduro?
Iwe unoda kuona zvakajeka ruvara kuti rambo rinoshanduka kutanga kana kuoneka kuburikidza ne dhayi. Kana zvisiri, zvinokwanisika kuti Muvara wemucheka haugone kupiswa, saka ruvara rwakashandurwa. Kana iwe uchida kugadzirisa izvi, saka unofanirwa kugadzirisa ruvara rwewuru usati wageza.
Nzira yekudzikisa sei shrinkage muyero we jeans?
Iyo shrinkage chiyero cheean chakaomesesa kudzora, kazhinji anotanga kugadzira mashoma mashoma mashoma emabhuruku, uye woedza chiyero cheshrinkage pamberi pehuwandu hukuru hwekusona. Asi zvakare teerera kune jasi jira rinoshandiswa, mamwe machira shrinkage rate haina kugadzikana, izvi zvinofanirwa kuedzwa kakawanda. Izvo zvakakoshawo kutarisisa kune tembiricha inoshandiswa mukushambidza sezvo musiyano tembiricha inogona kukanganisa chiyero cheshrinkage. Panguva imwecheteyo, huwandu hwemapuru emvura huchakanganisawo, nzira yakanyanya yekugeza nekukurumidza sezvinobvira nhamba yezvinhu gumi nemaviri, tarisa kana uwandu hwe shrinkage hwakakomba, Kana hongu
Ndingakwanise kugadzirisa tembiricha yemvura kuti ive contral yekushambidza nguva?
Ehe, zvakanaka kushandisa fureta kushambidza, nekuti Ferment inogona kuputika mumvura, yakawanda sei mvura inogona kukanganisa Ferment concentration, chero iwe uchiramba uine kumwe kusangana, wedzera kemikari mumiririri zvakare, kana kushandisa nguva yakareba yekukuya warp yeasina kusunungurwa jeans, latitude yarn. Izvi zvinogona kuita kuti yekugezesa iwedzere kana kupfupika.
Haisi imwechete ruvara seye oritalinal mushure mekushambidza maJeans, maitiro ekuvandudza dambudziko iri?
Kana iyo ruvara rwasviba mushure mekugeza, unogona kushambidza imwe imwe nguva. Kana iri yakareruka zvishoma, iwe unogona zvakare dhayi zvakare.
Nzira yekugadzirisa sei dambudziko iri kana paine mavara akasiyana mune imwechete batch jeans?
Nekuda kwekuti jira racho riine chroma rakasiyana, iwe unofanirwa kutenderera nekuparadzanisa ruvara kutanga usati wafunga, wobva wajeka imwe nguva mushure mekudaira, wobva watsemuka ruvara, Nenzira iyi, iwe unogona kuvaita kuti vave nemuvara mumwechete mubhandi rezvinhu. Uye zvakare, kana iwe ukawana iyo yekutanga batch yezvinhu ine mavara akasiyana, iwe unofanirwa kuzivisa iyo yekushambidza fekitori kuti ipatsanure ruvara panguva yekutanga.
Elastic Jeans mushure mekugeza ichakanganisa elastic, maitiro ekuvandudza?
Kune iyo jeans inotambanudza, kana iwe uchenesa ruvara kuti ruve rwekureruka, usapfuure kuchena kamwechete, uye tembiricha haifanire kunge yakanyanya kukwirira, iyo yepamusoro haifanirwe kupfuura makumi matanhatu℃. Chinhu chakakosha ndechekuchirega chicheneswa kaviri zvakapatsanurwa zvakasiyana kuti chirambe chiri elastic.
Sei ma jean achiri akanyanya kuoma mushure mekugeza?
Yekutanga ingangove dambudziko remachira, yechipiri ndeyekuti nguva yekushambidza haina kukwana, iwe unofanirwa kuwedzera nguva yekugeza kana uchida kuti mugumo uve munyoro, Iyo yechitatu ndiyo nzira yekugeza yatichashandisa, kana tinoshamba nedombo kana kuti Ferment, Izvo zviviri mhedzisiro uye huwandu hwacho zvakasiyana. Kana dombo rakashambwa ne enzyme, kuteedzana kweiyo ibwe kana enzyme, kana dombo racho rikashambwa ne enzyme muVAT, mhedzisiro yacho ichave yakasiyana. Maitiro ekugadzirisa kune iwo matanho mupfungwa dzako, iwe unofanirwa kuedza zvisina basa uye wedzera iwe kufunga, izvi zvinogona kuita mhedzisiro.
Iko kushomeka kwekunyorova mbiriso kune chekuita nemachira ayo kana zvigadzirwa zvakasviba?
Mucheka kana mbishi zvinhu zvekutanga ndizvo chikonzero chechipiri, chikonzero chechipiri ndechekuti kutora danho hakuitwe mushe, kushomeka kwenguva kucharatidzika kuva kwakaoma.
Kutenda kune zvaunofarira uye kunakidzwa nekuverenga kwako. Professional zvemakemikari mhando & masevhisi zvichapihwa, gamuchira nemwoyo wose kubvunza kwako uye zano!